Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo oo ka dhoofay garoonka magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweyne Farmaajo oo ka dhoofay garoonka magaalada Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyagoona kusii jeeda magaalada London ee caasimadda dalka UK, halkaasi oo lagu wado in 11-ka bishaan uu ka furmo shir looga hadlaayo arrimaha Soomaaliya.
Waxaa wafdiga madaxweyne Farmaajo ka mid ahaa ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Axmed Guuleed Khadar, wasiirka gaashaandhigga C/rashiid C/laahi, La-taliyeyaashiisa, qaar ka mid ah howl-wadeenadiisa, madaxweynayaasha maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeele iyo Galmudug iyo mas’uuliyiin kale.
Sidoo kale, wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa garoonka Aadan Cadde ku sagootiyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyagoona kadib raacay diyaaradda Turkish Airlines duulimaadkeeda tooska ahaa ee Muqdisho iyo Istanbul.
Wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa sii mari doonno magaalada Istanbul, iyagoona kadib halkaasi diyaarad kale oo u socota magaalada London halkaasi kasii qaadan doonno.
11-ka bishaan May ayaa la filayaa in magaalada London ee caasimadda dalka UK uu ka furmo shir ay kasoo qeyb-gali doonnaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyadda dalka iyo hay’addo caalami ah, waxaana shirkaasi diiradda lagu saari doonnaa arrimaha horumarineed ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, shir looga hadlaayo abaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa in habeen dambe lagu qabto magaalada London ee caasimadda dalka UK, iyadoona shirkaasi ay kasoo qeyb-geli doonnaan Soomaali fara-badan oo ay ku jiraan mas’uuliyiinta dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka.
Maalintii shalay ayay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ay wafdi hordhac ah u dirtay shirka magaalada London, kaas oo uu hoggaaminayay C/raxmaan Ceynte oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta haatanna ah madaxa qaban qaabada shirkaas ee dowladda federaalka Soomaaliya.